लाउडा विमान मुद्दाको फैसला १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमै घुम्दै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
लाउडा विमान मुद्दाको फैसला १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमै घुम्दै
प्रकाशित मिति २६ असार २०७६, बिहीबार १२:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । १९ वर्षअघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको १२ वर्षमा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए ।
तर, मुद्दाको किनारा लगाउन सकेका छैनन् । विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको सो मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा कसैले पनि मुद्दा किनारा लगाउने जाँगर चलाएनन् ।
मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्दामा चासो देखाएनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि सो मुद्दा दुईपटक पेसी तोकेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।
लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १२ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ । यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो ।
२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो । करिब ५ वर्षपछि २८ साउन २०६४ मा विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च गएको थियो ।
मोटरसाइकलमा ‘लिफट’ माग्ने युवतीको ‘नाटकीय बलात्कार’ ! बलात्कार हो कि यौन सम्पर्क ?
सिन्धुपाल्चोक । ‘जलविरे इ’ प्रहरीले राखेको काल्पनिक नाम । उनी मेलम्चीमा रहेको आफन्तको होटलमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।…
मेलम्ची ठेक्का रद्द हुनुमा खानेपानी सचिवकाे हेपाहा र कमिशनकाे माेह मुख्य जिम्मेवार
काठमाडौं । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने अवस्थामा पुग्नुमा खानेपानी सचिव र मेलम्ची विकास…
उपमेयर भन्छिन् रेनुलाई मेयरमा जिताएर गल्ती गरिएछ
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिका चितवनकी उपमेयर पार्वती शाहले महानगरपालिकामा अनियमितता बढेको बताएकी छिन् । उनले रेनु दाहाललाई मेयरमा जिताएर…